के प्रभावकारी खोजी इन्जिन अनुकूलनका लागि के मैले कदम चाल्नुपर्छ?
प्रभावी खोजी इन्जिन अनुकूलन (वा एसईओ) एल्गोरिदम अपडेटहरूको आधारभूत ज्ञान चाहिन्छ जुन गुगल नियमित आधारमा आउँछ।. प्रत्येक एसईओ चिकित्सक को क्षमताओं को हुनु पर्छ अलग हुनु पर्छ जो दस मौजूदा रणनीतिहरु लाई एसईओ अभियान को अन्त सम्म अंतिम लक्ष्य सम्म पुगन को लागी लागू. यो ज्ञानले तपाईंलाई अझ राम्रो एसईओको लागि कुन कदम उठाउन निर्णय गर्ने निर्णय गर्न मद्दत गर्नेछ.
आजका लेखमा, सेल्टल्ट विशेषज्ञहरूले तपाईंलाई 2017 मा काम गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी खोजी इन्जिन अनुकूलन रणनीतिहरूको बारेमा बताउनेछ।. सबैलाई थाहा पाउनका लागि पढ्नुहोस्. त्यसैले, सुरू गरौं.
तीन व्यावहारिक एसईओ विधिहरु जुन तपाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ
1. ल्याटन्ट सेन्ट्ट्टिक अनुक्रमणिकामा फोकस
ल्याटन्ट सेन्टिन्टिक अनुक्रमणिका, LSI को रूपमा पनि जानिन्छ, एक लोकप्रिय एसईओ विधि हो जुन सामग्रीमा अवधारणाहरु र सर्तहरू बीच सम्बन्ध निर्धारण गर्ने. यसले Google र अन्य खोज ईन्जिनियरिङ्लाई मद्दत गर्दछ विशेष अर्थहरु र वाक्यांशहरूको बहु अर्थ भेद गर्दछ.
बस राख्नुहोस्, LSI वेबपेजमा किबोर्डमा सम्बद्ध सामन्यहरूको लागी देखिन्छ.
यद्यपि एलआईएस 20 वर्ष भन्दा माथि प्रयोग भएको थियो, यो अभ्यास अझै पनि आजको SEO को लागि फायदेमंद छ. तपाईको वेब पेजहरु को Google रैंकिंग मा सुधार मा LSI कीवर्ड अच्छे हो. अधिक छ, तिनीहरूले सम्भावना बढाउँछन् कि तपाईंको संसाधन को रैंक SERP मा लामो समयसम्म रहनेछ र साथै तपाईंको साइटलाई सजायबाट बचाउनेछ.
2. हेडरमा स्थान खोज्नुहोस्
यो एसईओ उत्तम परिणामको लागि पनि धेरै फायदेमंद छ, भले यो पहिलो पटक 1 990मा पेश गरिएको थियो।. अधिकतर एसईओ विशेषज्ञहरूले यो रणनीतिलाई तपाईंको दिनको दिन एसईओ गतिविधिमा समावेश गर्ने सुझाव दिन्छन् किनकी खोज इन्जिनहरूले हेडिंग्स पृष्ठको मुख्य विषयहरूमा सुराग समावेश गर्न अपेक्षा गर्दछ।.
वर्षहरूको लागि एसईओमा केवल प्रासंगिक शीर्षक ट्याग H1 र H2 भएको छ. चीजहरू समयमै परिवर्तन भएको छ. आजकल, H1 देखि H6 सम्म6हेडर ट्यागहरू छन् - प्रत्येकले महत्त्वलाई कम पार्छ. H1 सबैभन्दा ठूलो हो, यो प्रति पृष्ठ एक पटक मात्र लागू गर्नु पर्छ, सामान्य रूपमा पोष्टको शीर्षकको लागि. प्रत्येक निरन्तर शीर्षक तत्व माथि माथिको उपश्रेणीको रूपमा लागू गर्नु पर्दछ.
3. प्राधिकरण साइटहरूसँग लिङ्क विचार गर्नुहोस्
त्यहाँ कुनै इन्कार छैन: आउटबाउन्ड लिङ्कहरू तपाईंको वेबसाइट रैंकिंगमा सुधार गर्दछ र प्राविधिक रूपमा सही रूपमा प्रयोग गरिन्छ।. साधारण शब्दहरूमा, आउटबाउन्ड लिंकहरू ती लिङ्कहरू हुन् जुन तपाईंको वेबसाइटबाट केही अन्य डोमेनमा उल्लेख गर्दछ. प्राधिकरण साइटहरूसँग जोड्दै Google लाई तपाईंको आला बुझ्न मद्दत गर्दछ र साथै तपाईंको साइटको गुणस्तर बढाउँछ, जुन तपाइँको साइट एसईओ मा मुख्य भूमिका निभािन्छ।.
प्राधिकरण साइटहरूसँग जोड्नु अनलाइन अनलाइन व्यवसायसँग सम्बन्धित स्थानसँग सम्पर्क सम्बन्धमा सबै भन्दा राम्रो तरिका हो।.
लिपि अप (3 9)
तपाइँको एसईओ प्रभावकारी बनाउन कठिन छैन किनकि यो पहिलो नजर लगाउन सक्छ. माथि उल्लेखित सिफारिसहरू पालन गर्नाले तपाईंलाई हाल लागू गर्दै एक भन्दा राम्रो एसईओ रणनीति सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ.
यदि तपाइँसँग कुनै प्रश्न छ वा तपाईंको प्रभावकारी एसईओ प्रविधिहरू साझेदारी गर्न चाहानुहुन्छ भने, हाम्रो सेल्टल्ट टोलीसँग सम्पर्क गर्न शर्म नगर्नुहोस्। Source . हामी हाम्रा पाठकहरू सुन्न चाहन्छौं!